Tag: kodzero | Martech Zone
MomentFeed: Yakawanikwa Local Mobile Kushambadzira Mhinduro dzekutsvaga uye Zvemagariro
Mugovera, December 19, 2015 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Kana iwe uri mushambadzi paketani yeresitorendi, kana pamusoro pemafranchise, kana keteni yekutengesa, haugone kushanda pamusika wese nepakati kusimudzira nzvimbo yega yega pasina imwe sisitimu. Chako chiratidzo hachinyatso kuoneka pakutsvaga kwenzvimbo, chisingaone kubatanidzwa kwevatengi vemo, havana maturusi ekugadzira kushambadza kunoenderana nekwako, uye ivo kazhinji havagone kuvepo kwakazara kwenhau. Sanganisa iko kuyedza pamwe nemamwe makiyi evatengi maitiro ekuchinja: 80%
MarketSnare: Yemunharaunda Kuonekwa kweNational Enterprise
Muvhuro, October 28, 2013 Muvhuro, October 28, 2013 Douglas Karr
Ndave ndiri murefu-nguva fan wevanhu kuCirrus ABS. Ivo zvino vaburitsa, MarketSnare, yakasarudzika webhu mhinduro iyo inokubatsira iwe kuwedzera yako yemunharaunda yekutengesa kuvapo! Shandisa ichi chishandiso chedigital kugadzira, kubata uye kugadzirisa yako brand uye kushambadzira kuburikidza newebhusaiti yemuno mawebhusaiti - vese vachishandisa imwechete yepakati interface. MarketSnare inogonesa chero sangano rine nzvimbo dzakawanda kuti rive nemawebhusaiti ega ega enzvimbo dzayo dzese. Mhinduro yacho inogona kuiswa chete